गोंगबुमा कृष्णबहादुरको ज्या’न लिएर सुड्केसमा हालेर फ्याँ’क्ने, कल्पनालाई आ’जीवन कारावास
Homeसमाचारगोंगबुमा कृष्णबहादुरको ज्या’न लिएर सुड्केसमा हालेर फ्याँ’क्ने, कल्पनालाई आ’जीवन कारावास
March 3, 2021 admin समाचार 6972
गोंगबुमा कृष्णबहादुर बोहराको ज्या न लि एर सुटकेशमा राखेर फ्याँ’क्ने कल्पना मुडभरीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको छ। कल्पनाले रोल्पा रून्टीगढी गाउँपालिका-७ घर भई गोंगबुस्थित एक होटलमा बस्दै गरेका ४५ वर्षीय बोहोराको निकै दर्दनाक तरिकाले ज्या न लिएकी थिइन्। उनको जिँउ सुटकेसमा राखेर नवज्योतिमार्गमा फ्याँ क्न लगेकी थिइन्। टाउको र खुट्टा भने केही पर भेटिएको थियो।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ३७ वर्षीया कल्पना मुडभरीलाई आजीवन काराबासको स’जाय सुनाएपाची अब उनी जीव’नभर जेलमै बस्नुपर्ने छ। तर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलावि’रुद्ध उनले पुनरावेदन गर्न सक्छिन्।
अत्यन्त क्रु’ र वा निर्म’मतापूर्वक ज्या’ न मा’ रेको भन्दै कल्पनालाई जन्म’कैदको सट्टामा आजीवन कारा’बास गर्नुपर्ने न्यायाधिश राजेन्द्र अधिकारीको फैसलामा उल्लेख छ। उनलाई जन्म’कैद मात्र भएको भए २५ वर्ष जेलमा बस्नुपर्ने थियो।
त्यस्तै कल्पनाकी छोरीले भने सफाइ पाएकी छन्। ना’बालकसमेत रहेकी उनलाई अदालतले सफाइ दिएको हो। ‘सुटकेस बोका’उन सहयोग गरेको भनिएकी छोरीलाई अदालतले स’फाइ दिएको छ। उनले मृत’क रहेको सुटकेस फो’होर भएको भन्ठानेर फोहोर फाल्न लगेको भन्ने ब’यान दिएकी थिइन्। त्यहीँ आधारमा उनले स’फाइ पाएकी हुन्।
श्रीमानसँग अ’लग भएर छोरीसँग बस्दै आएकी कल्पनाले लक’डाउनका समयमा रोल्पाको रून्टीगढी गाउँपालिका-७ घर भएका कृष्णबहादुर बोहराको ज्या’ न लि एकी थिइन्। गोंगबुस्थित एक होटलमा ब’स्दै आएका ४५ वर्षीय बोहोरा कल्पनाको कोठामा निय’मित आउने जाने गरेको प्रहरीको दा’बी थियो। घट’नापछि डेराबाट छोरीसहित भागेकी कल्पनालाई प्रहरीले चितवनबाट ल्या’एको थियो। – इताजा खबरबाट
योगेश भट्टराई र ईश्वर पोखरेलको ज’म्काभेट हुँदा देखियो यस्तो अ’फ्ठेरो दृश्य, एक अर्कासँग बोल्दै बोलेनन् (भिडियो सहित)
विवश बाबु, आफ्नै छोरीको यस्तो भिडियो ल्याएर पत्रकार स’म्मेलन गरेर देखाउनु पर्दा… (भिडियो सहित)
एक दिनको बन्दले मुलुकलाई २ अर्ब ५० करोड बराबरको नो’क्सानी, लगानीको क्षेत्र त्र’सित
February 4, 2021 admin समाचार 6337
कोभिडको महा’मारी र लकडाउनबाट थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र सत्तारुढ दल नेकपाको आ’न्तरिक कलह र बन्द हड्तालको मारमा परेको छ । सत्तारुढ दलको आपसी खिचातानीबाटको अर्थतन्त्र र दैनिक काम गरी खाने बर्ग मा’रमा परेका छन् ।
श्रीमानको निधन भएको दुई दिन पछि, सुत्केरी भएकी मैया गुरुङलाई इन्द्रेणी मार्फत सहयोग रकम हस्तान्तरण
July 8, 2021 admin समाचार 4567
चित’वन घर भई हाल भक्तपुर ठिमी नगरपा’®लीका १ मनोहरा बस्दै आनु भएका स्वर्गीय तान बहादुर गुरुङकी श्रीमती मैया गुरुङ र छोरीहरुको लागि बिभिन्न सह:योगी मनहरु मार्फत पछिलो पटक इन्द्रेणीमा प्राप्त सहयोग रकम हस्ता’न्तरण गरिएको छ
दीपेन्द्र के खनालको ‘चिसो मान्छे’ मा स्वस्तिमा खड्का !
August 24, 2020 admin समाचार 23875
ओझे’लमा परेका कथा भन्न रुचाउने निर्देशन दीपेन्द्र के खनाल हालै फिल्म ‘चिसो मान्छे’ निर्माणको घो’षणा गरेका छन् । फिल्ममा खनालको लेखन तथा निर्देशन रहनेछ । शर्मिला पाण्डे’ले निर्माण गर्ने यो फिल्मको यतिबेला स्क्रिप्टमा काम भइरहेको
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229902)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226277)